कास्कीको शुक्लागण्डकी माविलाई सहयोग | NepalDut
कास्कीको शुक्लागण्डकी माविलाई सहयोग
मर्दीखोला शैक्षिक प्रतिष्ठानले कास्कीका विभिन्न सरकारी विद्यालयलाई करिब ३ लाख बराबरको शैक्षिक सामाग्री तथा छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ ।
कास्की माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको शुक्लागण्डकी माविमा शुक्रबार प्रतिष्ठानको २१ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा विद्यालयहरुलाई सहयोग गरेको हो ।
प्रतिष्ठानले ६० हजार बराबरको २ वटा प्रोजेक्टर, ४० हजार बराबरको विज्ञान प्रयोगशालाका सामान, ४० हजार बराबरको पुस्तक हस्तान्तरणका साथमा विभिन्न विद्यालयका २५ जना गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाको छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । प्
रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष कास्कीका विभिन्न विद्यालयलाई शैक्षिक सामान हस्तान्तरण र छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ ।
कार्यक्रममा बागलुङका प्रतिनिधिसभा सांसद डा. सूर्य पाठकले मुलुकलाई सकारात्मक पथतर्फ लैजान शिक्षित हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘शिक्षा यस्तो औजार हो जुन मुलुकलाई सकारात्मक परिवर्तन गर्न मुख्य भूमिका खेल्छ । तर शिक्षाको स्तर कस्तो छ भन्नेमा पनि फरक पर्छ ।’
शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुनु आवश्यक भएको बताउँदै अन्य क्षेत्र जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा विकासको फड्को मार्न नसकेकोमा पाठकले दुःख व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘विकास भनेको बाटो मात्र होईन्, सबै क्षेत्रको विकास हुनु जरुरी छ । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको लगानी ज्यादै न्युन छ । शिक्षाको उचित नीति नबनेसम्म शैक्षिक क्षेत्र माथि उठ्न सक्दैन ।’
मर्दीखोला शैक्षिक प्रतिष्ठानका संस्थापक डा. राम गिरीले विद्यालय जीवनमा आफुसँगै पढ्ने साथीलाई परेको पिडा अरुलाई नपरोस् भनि प्रतिष्ठानको शुरुवात गरेको बताए ।
उनले भने, ‘बाल्यकालमा मेरो साथी पढाईमा निकै राम्रो भएपनि आर्थिक अभावमा पढ्न पाएन । त्यस्तो कसैलाई नहोस् भनी प्रतिष्ठानमार्फत गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई सहयोग तथा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छु ।’
कार्यक्रममा माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण बहादुर गुरुङ, नेपाल अभिभावक महासंघ कास्कीका उपाध्यक्ष गोपाल गिरी, माछापुच्छ्रे–५ का वडाध्यक्ष जुमबहादुर गुरुङ, शुक्लागण्डकी माविका प्राचार्य शान्तिरमण पोखरेल, माछापुच्छ्रे–३ का वडाध्यक्ष सुर्यप्रसाद लम्साल, शुक्लागण्डकी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रबिलाल पोखरेललगायतले बोलेका थिए ।
प्रतिष्ठानका सचिव डिल्लीराम गिरीले सरकारी विद्यालयलाई समयमै प्रतिष्ठानसँग माग गर्न अनुरोध गर्दै सहयोग निरन्तर रहने बताए ।
विद्यालयलाई अति आवश्यक सामान अनुगमन गरेर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त समेत गरे । कार्यक्रमको संचालन प्रतिष्ठान सदस्य अनिल लामिछानेले गरेका थिए ।